Ebe a na-aga Guyana ugbu a iji kwalite njem na US na Canada
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ebe a na-aga Guyana ugbu a iji kwalite njem na US na Canada
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • omenala • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Guyana • LGBTQ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Guyana Tourism Authority, ndị ọrụ gọọmentị na-eme njem nlegharị anya nke "Destination Guyana", emeela otu ụzọ iji gakwuru ndị ọbịa si United States na Canada.
Ejiri Guyana dị ka ebe ọzọ ga - ahụta maka ndị njem. Site na ụgbọ elu ndị na-anaghị akwụsị akwụsị kwa ụbọchị sitere na New York, Miami na Toronto, na ọ bụ naanị mba na-asụ Bekee na South America, ndị njem nwere ike ịnwe ọdịbendị ọdịbendị mara mma, akụkọ ntolite bara ụba yana ndị ọbịa na ndị ọbịa enyi na-enweghị atụ n'asụsụ abụọ ahụ maara kacha mma. Ngwakọta a na-apụghị ịgbagha agbagha nke ịma mma sitere n'okike, oke mmiri ozuzo na-enweghị atụ, nsụda mmiri nke ụwa na anụ ọhịa dị ịtụnanya ga-eju afọ ọ bụla na mgbasa ozi mmekọrịta. Ga ileta ụmụ amaala obodo mara mma na ụsọ osimiri na-emepebeghị emepe; ịga ememme, ịnyịnya, regattas na carnivals; na isonye na 4 × 4 safaris na ikiri nnụnụ bụ naanị aka ole na ole nke inye ndị njem North America agụụ na-agụ enweghị ụkọ ihe.
North America bụ otu n'ime ahịa anyị kachasị ike nke nwere agụụ njem ọdịnala maka ezigbo ọdịbendị na ọdịdị / njem. Guyana nọ n'ọkwá kasị elu iji mee ka nke ahụ kwekọọ! ” - Brian Mullis, Director nke Guyana Tourism Authority kwuru.
“Obi dị anyị ụtọ site na ohere iji soro Destination Guyana rụkọọ ọrụ iji kwalite paradaịs a maka ndị hụrụ okike, ndị na-achọ njem njem, na ndị njem nlegharị anya na njem njem na North America. Anyị na-atụ anya ịnabata Guyana na-ekpo ọkụ, nke a na-achọpụtabeghị na South America. ” - Jane Behrend kwuru, Onye isi ala, Ebe Na-apụ apụ. Agencylọ ọrụ ahụ tinyere Guyana na ndepụta nke mpaghara na mba ha na-anọchi anya na US
N'ịbụ nke amachaghị na US na Canada, Guyana bụ obere mba South America nke na-anọchite anya agbụrụ isii na ọdịbendị Amerindian bara ụba. N'ịbụ ndị Brazil, Suriname na Venezuela gbara, Guyana bụ akụkụ nke Guiana Shield a na-asọpụrụ, otu n'ime mpaghara biodivers kachasị n'ụwa nke gụnyere ọtụtụ ụdị jupụtara na South America 'Ala ndị Refeyim.' Guyana nwere oke osimiri Atlantic na ugwu, ugwu di egwu di n’akuku odida anyanwu, savannah anaghi agwu agwu n’ebe ndida ya na 18% nke oke ohia nke uwa dum. Ọ bụ ebe egwuregwu na-emeghebeghị maka ndị na-eme nchọpụta na ndị na-achọ njem.
Guyana Tourism Authority (GTA) bụ ngalaba gọọmentị kwụụrụ onwe ya na-ahụ maka mmepe na ịkwalite njem nleta na-aga n'ihu na Guyana site na mmekorita ya na ndị ọrụ nwanne nwanyị na ndị ọrụ njem njegharị iji bulie nsonaazụ akụ na ụba na nchekwa na mpaghara ma melite ahụmịhe ndị ọbịa. . GTA lekwasịrị anya na Guyana ka a mata ya na mpaghara ya na mba ụwa dị ka ebe mbido iji chebe ihe nketa ya na ọdịbendị ya, na-enye ahụmịhe ziri ezi, na ịbawanye uru akụ na ụba mpaghara.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ọgaranya na ọtụtụ onyinye dị iche iche nke Guyana www.guyana-tourism.com ma ọ bụ soro Discover Guyana na Facebook, Instagram na Twitter.